प्रधानमन्त्रीलाई ऋचा शर्माको खुलापत्र, ‘भोलि मेरो छोरी जन्मिएला भन्ने डर लाग्न थालेको छ’ - Malayakhabar
होम पेज विचार/साहित्य प्रधानमन्त्रीलाई ऋचा शर्माको खुलापत्र, ‘भोलि मेरो छोरी जन्मिएला भन्ने डर लाग्न थालेको...
प्रधानमन्त्रीलाई ऋचा शर्माको खुलापत्र, ‘भोलि मेरो छोरी जन्मिएला भन्ने डर लाग्न थालेको छ’
काठमाडौं := अभिनेत्री ऋचा शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चिठी लेखेकी छिन्। उनले पछिल्लो समय देशमा बलात्कारका घटना, सरोकारवाला पदमा बसेका व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्ति लाई लक्षित गर्दै पत्र लेखेकी हुन् ।
गत साता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बलात्कारका बारेमा दिएको अभिव्यक्ति विवादमा आएको थियो। धेरैले आपत्ति जनाएको उनको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको भन्दै ऋचाले पनि सामाजिक सञ्जालमा थापा र अघिल्ला मन्त्री तथा राजनीतिज्ञका गैरजिम्मेवार अभि व्यक्तिको हिसाबकिताब जनताले राखिरहेको भन्दै टिप्पणी गरेकी थिइन्।
चिठी यस्तो छ :
आदरणीय प्रधानमन्त्री ज्यू ,,
यहाँ बालिकाहरुलाई समेत खुलेआम राक्षसहरुले भोग लगाउँदा, हामी कठैबरा मात्र भएका छौं। जनताको नभए पनि एकचोटि परिवारमा छोरी नातिनीको आँखामा आँखा जुधाइ भनी हेर्नुस्। के यो देशमा उनीहरु सुरक्षित छन् र ? म सरकारमा विश्वास राख्ने मान्छे, हिजोआज मेरा पैताला डगमगाउँदै छन्। बाँकी तपाईंहरू बुझ्झकी !
निवेदक एक आम नेपाली नारी , ऋचा शर्मा
अघिल्लो लेख जेलबाटै रेशम चौधरीको कविता : साथ छोडेर हिँडे साथी !
पछिल्लो लेख बारामा वार्षिक ६ अर्बको माछा कारोबार